Heshiis hordhac ah oo laga gaaray beelo kudagaalamay degaanka Xanan-buure | Allbalcad Online
Home WARARKA Heshiis hordhac ah oo laga gaaray beelo kudagaalamay degaanka Xanan-buure
Heshiis hordhac ah oo laga gaaray beelo kudagaalamay degaanka Xanan-buure
Waxaa Galabta heshiis horudhac ah laga gaaray dagaalkii labada maleeshiyo Beeleed ku dhex-maay degaanka Xananbuure ee Gobolka Galgaduud, kadib kulamo maalmihii la soo dhaafay ka socday halkaas.
Odayaasha labada Beelood ay kasoo kala jeedaan maleeshiyaadkii dagaalamay ayaa saxiixay heshiiska horudhaca ah oo ka kooba 12 qodob, waxaana la go’aamiyay in muddo todobaad gudahood ah la isku keeno si loo dhameystiro heshiiska.
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Odayaasha Dhaqanka & Waxgaradka labada Beelood ayaa goobjoog ka ahaa madasha heshiiska lagu gaaray, waxaana heshiiska garwadeen ka ah wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Cabdiramaan Al-Cadaala, Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed iyo Masuuliyiinta ka tirsan Galmudug .
Hoos Ka Akhriso 12 Qodob oo uu ka kooban yahay heshiiska horudhaca ah ee la gaaray.
Odoyaasha Dhaqanka labada Beelood waxaa ay ka xun yihiin colaadii foosha xumeyd ee dhex martay waxaana ay katacsiyadeynayan qasaarihii ka dhashay naf iyo maal.
Waxaa la isla gaaray xabad joojinta buuxda oo shuruud la’aan ah taasoo ka hirgasha dhamaaan deeganada ay colaadu sameysay.
Xabad joojintan waxaa ay kawada Dhaqane galeysaa dhamaan deeganada labada beelood wada degaan ee ay colaadu saameysay.
In laga fogaado waxkasta oo xabad joojinta wax u dhibi Kara ficil iyo hadal intaba si loo soo celiyo kalsoonida bulshada.
In deegaanka Xananbuure dib loogu celiyo dadkii shacabka ahaa Ee ka barakacay si noloshu ay caadi ugu soo noqoto.
Cidii jabisa xabad joojinta waxaa loo aqoonsanayaa qaswade waxaana ciidanka amnigu fasax u qabaan In ay ka qaadaan tilaabada ku haboon.
Waxaa la dhisay guddi ka kooban 15 xubnood oo ka kala imaanaya beelaha uu dagaaalku dhex maray iyo xubno ka socda Maamulka Galmudug.
Laga bilaabo 13/02/2021 waxaa ka mamnuuc ah deegaanka Xananbuure in lagu dhex wato hubka waaweyn iyo midka yar yar iyadoo cidii Lagu arko ay ciidamada amnigu amar u heystaan in ay kala wareegaan hubka, qofka watana ay ka qaadaan tilaabada ku haboon.
Gaadiidka gaarka loo leeyahay Ee lagu ogaado inuu ka qeyb qaadanaayo ficilada nabadgalyada lidka ku ah waxaa uu wajihi doonaa ciqaabta ku haboon.
Laga bilaabo maanta 13/02/2021 qofwalba oo geysta fal dambiyeed waxaa odoyaasha labada beel waajib ka saaranyahay inay soo qabtaan eedeysanaha iyagoo gacan ka helaya ciidanka amniga.
Muddo 7 beri gudahood ah waxaa la dhigi doonaa gogol dib u heshiisiineed oo ay labada beel kuwada hadlaaan si looga heshiiyo dhamaan waxyabaha sababay dagaalka.
Waxgaradka iyo odoyaasha labada dhinac waxaa ay u mahad celinayaan cid kasta oo heshiiskan gacan ka geysatey.
Previous articleMario Draghi sworn in as Italy’s new prime minister
Next articleDowladda Soomaaliya & Beesha Caalamka oo ka shiray dagaalka Al-Shabaab